Flash-kayga radar-ka ayaa baxay, hadda waa maxay? | Ragga Stylish
Xaqiiqdii in kabadan hal mar waxaad soo martay aag leh radar ama xoogaa xakameyn xawaare ah inta aad gaari wadid. Waxaa jira qaladaad badan oo dheel dheel ah na dheeli kara oo aakhirka ganaax ku dhaca. Ganaaxyada la xiriira DGT waxay leeyihiin habab loo baahan yahay in si sax ah loo fuliyo haddii aan dooneyno in xadgudubku uusan intaas ka sii sii darin. Hadaad waligaa shaki ku saabsan sida loola taliyo ganaaxa taraafikada, kani waa boostadaada.
Waxaan dooneynaa inaan u hibeyno qodobkaan si aan kuugu sheegno wax walba oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato ganaaxyada taraafikada.
1 Sida loo hubiyo ganaaxyada taraafikada
1.1 Amarka Guddiga Cunaqabateynta
1.2 Ganaaxyada E-maylka
2 Kaamirooyinka xawaaraha iyo tikidhada taraafikada
3 Muhiimadda suunka kursiga
Sida loo hubiyo ganaaxyada taraafikada
Waqtigaan la joogo, hubinta ganaaxyada taraafikada waa hawl fudud oo fudud oo meel kasta oo adduunka ah laga sameyn karo waqti kasta. Waxaan ubaahanahay kaliya taleefanka gacanta ama kombiyuutarka leh marin internet iyo Waxaan ka hubin karnaa diiwaangelinteenna haddii ay jiraan wax ganaax ah oo aan sugeyn.
Halkan waxaan ku sharaxeynaa habka ugu fudud uguna tallaabo-tallaabo ah ee ku saabsan sida hubi tikidhka taraafikada. Marka lagu daro raacitaanka nidaamkan, hoosta waxaan ku arki doonaa dhulal kale oo aad aadi karto si aad u ogaato ama aad uga ogaato ganaaxyada taraafikada ee suurtogalka ah.
Amarka Guddiga Cunaqabateynta
Waxaa lagu yaqaan magaca TESTRA waana inaad gashid webka meesha Waxaan marin u heli doonnaa dhammaan ogeysiisyada ku saabsan nidaamyada kala duwan ee cunaqabateynta ee DGT. Halkan waxaad ku hubin kartaa ganaaxa adoo adeegsanaya lambarka diiwaangelinta gaariga, DNI ama magaca iyo magaca qoyska. Halkan waxaa ah ikhtiyaar aad u xiiso badan oo u adeegta in laga saaro xogteenna si aan si rasmi ah loo daabicin. Haddii aadan rabin dadka kale inay ku arkaan xogtaada TESTRA, waad codsan kartaa in lagu daro liiska laga reebay.
Waxaad iska qori kartaa Hay'adda Wadooyinka Elektiroonigga ah (DEV). Waa adeeg iskaa wax u qabso ah oo bilaash ah oo muwaadiniinta oo dhami ay ku awoodaan ku hel emayl ogeysiin kasta oo ganaax ah, isgaarsiinta iyo maamulada kale ee leh awooda cunaqabateynta arimaha taraafikada. Diiwaangelintu waa ku qasab dhammaan hay'adaha sharciga ama shirkadaha.
Way fududahay sida kugula socodsiinaysa emayl ama SMS haddii aad ganaax leedahay. Intaas waxaa sii dheer, ma heli doontid ogeysiiska warqadda oo waad ka bixi kartaa xubinnimada markasta oo aad rabto. Haddii xogtaada aan lagu cusbooneysiinin DGT, ma racfaan ka qaadan kartid ganaaxa. Waxaa jira aaminaad caan ah oo ah in haddii xogtaadu aysan ku jirin DGT ama aadan cusboonaysiin cinwaanka beddelaad, waxaad xor u tahay inaad bixiso ganaaxa taraafikada. Laga soo bilaabo 2009, dhammaan ogeysiisyada cunaqabateynta waxaa lagu daabacayaa guddiga ogeysiiska waxaana loo tixgeliyaa ogeysiis. Haddii xogtaadu aysan cusbooneysiin, ganaaxyada adiga kuma soo gaari doonaan waxaadna lumin doontaa fursadda aad rafcaan uga qaadan karto.
Waa muhiim inaad hubiso haddii aad tikidh u leedahay xawaareyn, baarkin dhigasho aan habboonayn, ka boodidda nalalka cas, iwm. Aakhirka waxay noqon kartaa wax aad u daran haddii aan sifiican wax loogu qaban waqtiga loogu talagalay.
Haddii aadan isdiiwaangalin, ha aaminin e-mayllada badan ee imanaya iyo inay khayaano yihiin. Xusuusnowna inaad markasta awooddo hubi in gaarigaagu uu leeyahay ganaax oo leh tallaabooyinka aan kor ku soo sheegnay.
Kaamirooyinka xawaaraha iyo tikidhada taraafikada
Waxay u dhacday qaar badan oo ka mid ah inay si aamusnaan ah u raacaan gaariga ku wareegaya waddo isla markaana shucaaca radar-ka uu ku boodayo. Waa halkan meesha shakigu ka yimaado sida aan u aragno ganaaxa ay ina siinayaan. Dambiga yar ayaa isu rogi kara dambi aad u daran haddii aanaan wax ku bixin waqtigii loogu talo galay ama aan sheeganno in aanan gelin dambi noocan oo kale ah.
Maanta, mahadsanid tikniyoolajiyadda, waxaan u adeegsan karnaa aalado kala duwan oo websaydh ah halkaas oo ay noogu sheegaan haddii aan ganaaxno iyo in kale. Sannado kahor way ka sii dhib badnayd ogow inay bixiyeen tikidhka taraafikada. Waxaad la tashan kartaa oo keliya faafinta rasmiga ah ee dawladda iyo wax yar oo kale. Sidoo kale waa inaad sugto inuu boosta la yimaado ogeysiiska.
Inaadan ka walwalin inaad haysato tikidhka taraafikada ee sugaya u horseeda dhibaatooyin aad u daran. Hay'adda cunaqabateyntu saaran tahay ayaa mas'uul ka ah daabacaadda ogeysiisyada ku jira wargeysyada u dhigma si rasmi ah. Wakhtiga kama dambaysta ah ka dib si aad u awoodo inaad racfaan ka bixiso oo aad ganaaxa bixiso, waa halka ay ku dhacaan qabashada xisaabaadka bangiga, hantida hantida, iwm. Waa wax iska caadi ah in la iska ilaaliyo xaaladdan oo kale, sidaa darteed la tashiga tigidhada taraafikada waa inay ahaato mudnaanta koowaad.
Muhiimadda suunka kursiga
Mid ka mid ah sababaha ay tigidhada taraafikada maalin kasta u badan yihiin waxaa ugu wacan maqnaanshaha suunka intaad gaariga wado. Ololayaasha kontoroolka qaar waxaa la ogaaday in dadka badankood oo aan xirneyn suumanka kuraasta ay yihiin wadayaasha gawaarida gaarka loo leeyahay iyo rakaabka ku socda gawaarida dadweynaha.
Suunka kursigu uma adeego oo keliya ilaalin, laakiin sidoo kale waxay kaloo kaa caawinaysaa inaad ilaaliso noloshaada. Haddii aad u malaynayso in lagugu ganaaxay suunkaaga suunka, marka hore hubi oo sug dhawr maalmood inaad booqato websaydhka oo aad aragto haddii aad haysato tigidh taraafikada.
Sidaad u jeeddo, xitaa maanta waxaa jira dad badan oo iyagu mas'uul kama aha gaariga waxayna ku dambeeyaan helitaanka tigidhka taraafikada oo u horseedi kara dhibaatooyin aad u daran. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto muhiimada ay leedahay la tashiga tigidhka taraafikada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Flash-kayga radar-ka ayaa baxay, hada waa maxay?
Toosinta timaha ragga